Google na-eme ihe ọchị nke 16 GB iPhone na ọkwa ya ọhụụ | Akụkọ akụrụngwa
Google na-eme ihe ọchị nke 16GB iPhone na mgbasa ozi ọhụụ ya
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọnụ ụlọ ọrụ ndị Apple na-eche mgbe niile na-enwe ọhụụ ọhụụ na ọrụ ọhụụ, Apple na-aga n'ihu na-ebido ngwụcha yana 16 GB, ụdị ntinye bụ isi, oghere nke na-anọ ihe dịka 10 GB, ma ọ bụrụ na ewepu ohere enwere site na sistemụ arụmọrụ. Na 10 GB ndị ahụ, anyị enweghị ike ịwụnye egwuregwu dị egwu ma were foto na vidiyo ole na ole. Ọ bụrụ na anyị etinye foto ma ọ bụ vidiyo na mkpebi 4k, anyị nwere ike ichefu ịnụ ụtọ ohere na ngwaọrụ anyị. Google maara nke a, dịka ndị ọrụ, na njakịrị banyere ya na mgbasa ozi ọhụụ ọ na-akwalite Foto Google.
Na ọkwa Google ọhụụ, enweghị onyonyo nke iPhone ekwuru ma ọ bụ gosi, mana eserese eserese eji na iOS gosipụtara yana ụda njirimara nke iPhone. Vidio ahụ na-egosi anyị ọnọdụ, maka ọtụtụ akụkụ, nke pụrụ iche nke na-enweghị ike ịmeghachi.. N'oge anyị na-ese foto ahụ, ọ dị ka ozi nke a gwara anyị na oghere dị na ngwaọrụ anyị juputara na anyị na-aga Ntọala ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inweta ohere iji gaa n'ihu na-ese foto.
Ugbu Google Photos bụ nhọrọ kachasị mma maka njedebe ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta ndabere foto anyị niile na vidiyo anyị na-eme, nwere mmachi na 16 mpx na vidiyo na 1080. Ma na Apple anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ otu euro kwa ọnwa iji nwee ike ịgbasa ohere nchekwa ahụ ruo 50 GB. N'ezie, iOS agaghị enwe ọrụ maka ihichapụ foto site na ngwaọrụ anyị ka anyị na-ebugo ha na iCloud, ihe Google na-enye anyị ohere ịme ka anyị wee nwee oghere na ngwaọrụ anyị mgbe niile iji were foto na vidiyo na-enweghị nchegbu gbasara oghere dị na anyị iPhone.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Google na-eme ihe ọchị nke 16GB iPhone na mgbasa ozi ọhụụ ya
Ihuenyo mmetụ ihu nwa, vidiyo na imewe iji chịkwaa nwa gị
Nokia amaliteworị ịmepụta ọdụ ọhụrụ ya na India